अमेरिकी चुनावः ट्रम्पको पक्षमा रुस, विपक्षमा चीन–ईरान ? - बडिमालिका खबर
अमेरिकी चुनावः ट्रम्पको पक्षमा रुस, विपक्षमा चीन–ईरान ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन केवल १ महिना टाढा छ । प्रतिस्पर्धी डोनाल्ड ट्रम्प वा जो बाइडेनमध्ये रुस, चीन र ईरानले कसलाई गोप्य रुपमा समर्थन गर्दैछन् ? अहिले यस विषयमा सर्वत्र चासो छ । ३ नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनअघिका तीन राष्ट्रपतिय बहसमध्ये ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस गत मंगलबार सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी दुई बहस थप तातो हुने आँकलन गरिएको छ । वासिङटनका गुप्तचर निकायका शीर्ष अधिकारीहरु भने चीन, रुस र ईरानजस्ता विदेशी शक्तिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्नसक्ने भयमा छन् ।
२०१६ को राष्ट्रपतिय निर्वाचन
स्रोत : https://eurasiantimes.com/
आउलान भोट माग्न जनताको आगनमा